काेहलपुर क्रिकेट मैदानः खेल्ने याेग्य त भयाे तर पुर्णता कहिले पाउने ? | | Neplays.com
काेहलपुर क्रिकेट मैदानः खेल्ने याेग्य त भयाे तर पुर्णता कहिले पाउने ?
By Neplays	 Last updated Apr 25, 2019
नेपाली खेलकुदमा क्रिकेट स्टेडियम नबनेर चर्चामा आएको दोस्रो मैदान हो बाँकेको कोहलपुर क्रिकेट मैदान । यो मैदानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेर घोषणा गरेका ब्यक्ति नै अहिले हामी माझ छैनन तर मैदानको काम भने कहिले सकिने त्यो अत्तोपत्तो छैन । प्रदेश ५ मा आँठौं राष्ट्रिय खेलकुद हुने भएपछि कोहलपुर क्रिकेट मैदान खेल्न योग्य बनाइएको छ ।
२०७० सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्नो गृह क्षेत्रमा एउटा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान होस भनेर बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा त गरे, तर मैदानमा काम हुन निकै समय लाग्यो । तराईको समथल ठाउँमा चाहेको भए यो मैदान तीन बर्ष अगाडी नै राम्रो भेन्युका रुपमा बनिसक्थ्यो । तर मैदान बनाउने भनेपछि हरेक आर्थिक बर्षमा बजेट पनि नगएको होइन, तर काम कहिलेपनि ढंगिलो तरिकाले पुर्ण रुपमा भएन ।
यो मैदान कहिले गौचरणमा परिणत भयो त कहिले सुकुम्बासीले हडप्यो भन्ने सम्मका कुरा आए । हुनपनि विचमा यो मैदानको काम पुरै ठप्प बनेको थियो । नत मैदानको वरिपरी तारजाली थियो, नत कसैले संरक्षण नै गरेका थिए । तर पछिल्लो पटक यो मैदान निर्माणका लागि स्थानीय सरोकार वालाले नै चासो दिन थालेपछि र समयमा बजेट गएपछि केहि परिवर्तन हुँदै यो ।
अहिलेसम्म यो मैदानमा अहिलेसम्म दुई करोड २० लाखसम्म खर्च भइसकेको छ । मैदान निर्माणका लागि २०७२ सालमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइदा फ्रिज भयो भने काम सुरु नै भएन । तर २०७३ को आर्थिक बर्ष र २०७४ को आर्थिक बर्षमा झण्डै दुई करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । जुन रकमले कोहलपुर क्रिकेट मैदानको आधारभुत काम भयो भने क्रिकेट मैदान जस्तो देखिन थाल्यो ।
त्यसपछि यो मैदानको संरक्षणका लागि स्थानीय क्रिकेटकर्मीले नै नियमित हेर्न थाले । यतिबेला आठौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि थप १० लाख रुपैया उपलब्ध गराइयो, जसले मैदानको पिचका साथै आउटफिल्ड र अन्य कहि काम गरियो ।
अब फेरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यो मैदानमा ६८ करोड रुपैयाँको योजना थपेको छ । जसका कारण अब यो मैदान बन्छ की भन्ने आशा पलाएको छ ।
अहिले यहि मैदानमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले क्रिकेट खेलहरु आयोजना गर्न सफल भयो । जसमा खेलाडी पनि केहि हदसम्म खुसी पनि छन । नेपालमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान नभएको र भएको भए क्रिकेट विकाश हुन्थ्यो भनेर खेलाडी देखि क्रिकेटकर्मी बोलिरहदा, अर्को तिर एउटा संस्थाले नै अन्तराष्ट्रिय स्तरको मैदान बनाउने भनेर उद्घोष गरेको छ । जसको काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।
तर सरकारको बजेटमा बन्ने भनिएको कोहलपुर जस्ता अरु सात स्थानका मैदानको काम भने सुखद छैन । यदि योजनाबद्ध रुपमा काम गरेमा कोहलपुरमा मात्र होइन पुर्वदेखि पश्चिमसम्म राम्रा क्रिकेट मैदानहरु तयार हुने थिए ।